MAREEGTA ARRIMAHA CAAFIMAADKA » Maska dilaaga ah ee Black Mamba oo suntiisu la ogaaday in xanuunka yarayn karto
Maska dilaaga ah ee Black Mamba oo suntiisu la ogaaday in xanuunka yarayn karto
Daraasaad ay soo saareen culimo dhakhaatiira oo u dhalatay dalka Faransiiska, daraasaad ay ku shaaciyeen Nature, ay sheegeen in mas ka mida masaska dunnida ugu dheereeya uguna khatarsan xaga sunta ama dilaaga ah ee loo yaqaano Black Mamba. Maskan Black Mamba oo ku badan dalalka koonfurta Afrika ku yaala. Maskan Black Mabma oo qaniiyadiisa sunta ahi lagu qiyaasay in ay dili karto ama khaarajin karto tiro ilaa 30 qof gaadhaya. Black Mamba waxaa loogu bisiyey gudaha afkiisa oo madow,
Haddaba waxaa jirtay cilmi baadhisyo hore loo sameeyey oo masaska laga sameeyey, si looga sameeyo sunta masaska, daawo yaraysa xanuunka. Waxaa dunnida maanta ka caana dawada xanuunka yaraysa ee la yidhaahdo MORFIN. Side effects ay leedahay morfintu ayaa waxaa ka mid in uu qofkii adhabti gareeyo dawada morfin-ta, addictive ku noqdo oo ay xanuun si siya ay u keento iyo madax-xanuun.
Haddaba cilmi-baadhayaasha ayaa sheegay in dawada laga sameeyey sunta maska Black Mamba ay ka awood badan tahay ta morfinta, hase yeeshee aanay lahayn wax side effects ah. Ilaa imminka waxaa sunta laga sameeyey maska dilaaga ah ee Black Mamba lagu tijaabiyey jiir, najiijadiina waxay noqodtay mid lagu riyaaqo. Daraasadan oo imminka maraysa ama ku jirta marxaladii 1 aad ee lagu daraasaynayey ammuurtan ayaa la sii wadi doona ka hor intaa aan lagu tijaabin dadka caadiga ah. Cilmi-baadhayaashan oo daraasadooda ku soo bandhigay joornaalka caanka ah ee xaga arrimaha cilmi-baadhista lagu soo bandhigo ee loo yaqaano NATURE.
Halkan hoose ka daawo film yar Black Mamba